महिलामा पुरुषलाई के हुन्छ | स्टाइलिश पुरुषहरू
महिलाबाट पुरुषलाई कुन कुराले जोड्छ
एलिसिया टोमेरो | 24/05/2022 14:08 | व्यक्तिगत हेरचाह, जोडी र सेक्स
तिमी जान्न चाहन्छौ कसरी एक पुरुष एक महिला संग प्रेम मा पतन गर्न? यद्यपि यो सजिलो देखिन्छ, त्यहाँ धेरै महिलाहरू छन् जसलाई कसरी सम्बन्ध कायम राख्ने थाहा छैन र कहिलेकाहीँ यसले यसलाई ओइलाउँछ। यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि पुरुषले महिलाबाट के हुक गर्दछ, हामी तपाइँलाई केहि मुख्य सुझावहरू दिन्छौं जोश चिंगारी राख्न जारी छ।
यदि तपाईंले सम्बन्ध सुरु गर्नुभयो भने, तपाईंले यसलाई विस्मृतिमा पर्न दिनु हुँदैन, तपाईंले सधैं गर्नुपर्छ लाइन राख्नुहोस् र सबै कुरा नियमित हुन नदिनुहोस्। सामान्यतया पुरुषहरू मीठो, दयालु र धेरै समझदार महिलाहरू मन पराउँछन्।
1 के एक महिला देखि एक पुरुष हुक?
2 पुरुषले महिलामा के खोज्छन् ?
2.4 बुद्धि र ज्ञान
2.6 भावनात्मक र आर्थिक स्वतन्त्रता
2.7 तपाईं आफ्नो निर्णय आफै गर्न चाहनुहुन्छ
के एक महिला देखि एक पुरुष हुक?
त्यो व्यक्ति संग भएको आराम र दोस्रो रूपमा हुन सक्ने सबै कुरामा स्वीकृति हावी हुन्छ। एक व्यक्ति जो आफ्नो भावना व्यक्त गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्दछ र जहाँ उनीहरूले उसलाई समर्थन गर्न सक्छन् र एक भन्दा बढी सल्लाह पनि दिन सक्छन् उनीहरूलाई मनपर्छ।
यो साझेदार विश्वासयोग्य, भरोसेमंद, वफादार, सम्मानजनक र सबै भन्दा माथि, हास्य को भावना हुनुपर्छ भनेर औंल्याउन सकिन्छ भन्दा बढी अर्थहरू। सुन्न जान्ने महिला, यौन मन पराउने, खाना पकाउन जान्ने र को रोमान्टिक पनि यस्ता विवरणहरू हुन् जसले पुरुषलाई महिलालाई जोड दिन्छ।
पुरुषले महिलामा के खोज्छन् ?
El साझा चीजहरू छन् र समान स्वाद साझा गर्नुहोस् जीवनका लागि समस्याहरू हुन् जसले सधैं जोडीलाई एकताबद्ध बनाउँछ। हामी समीक्षा गर्नेछौं कि महिलाप्रति पुरुषको आकर्षणको कुञ्जीहरू उल्टो रूपमा समान रूपमा काम गर्दछ र यी केही हुन्। पक्षहरूलाई ध्यानमा राखिएको छ।
निस्सन्देह, पहिलो छाप के गणना छ, र यद्यपि यो सतही लाग्न सक्छ, हामी यो अवधारणा संग आफैलाई मूर्ख बनाउन जाँदैछैनौं। सल्लाह छ सुन्दर र सुरुचिपूर्ण जानुहोस्, तर को विशेषताहरु लाई पनि हाइलाइट गर्नुहोस् प्राकृतिक रूपमा सुन्दरता। एउटी महिला सुन्दरताको क्यानन भित्र नपर्न सक्छ र अझै पनि अरू जत्तिकै आकर्षक छ।
राम्रो गन्ध आउनु भनेको अर्को सामग्री हो जसले तपाईंलाई जोड्छ। अत्तर उद्योग मा त्यहाँ धेरै सुगन्ध छन् जुन अब जो कोहीको लागि उपलब्ध छ र व्यक्तित्व अनुसार प्रयोग गर्न पाउनु सबै भन्दा राम्रो खेल हो। अर्कोतर्फ, हाम्रो शरीर भित्र एउटा विशेष गन्ध छ जुन सबैभन्दा प्राकृतिक हो र जुन सबैभन्दा राम्रो सम्झिन चाहन्छ। राम्रो शौचालय नबिर्सनुहोस् र आफ्नो शरीर सफा गन्ध दिनुहोस् तपाईंको प्राकृतिक शरीर गन्ध को अर्थ संग।
यो अर्को गुण हो जुन समीक्षा गरिएका पछाडि छ, तर लगभग समान मूल्यको साथ। टोन र भोल्युम तिनीहरू धुनबाट बाहिर निस्कन सक्छन् र चालहरू खेल्न सक्छन्।
बुद्धि र ज्ञान
छविले मानिसलाई झुन्ड्याउन धेरै गर्छ, तर यसको पछाडि त्यहाँ छन् महिलाको बुद्धि कि तपाइँ अझै धेरै यसलाई समात्न सक्नुहुन्छ। यदि यो अवस्थित छ एक विवाद समाधान कि तिनीहरू तनाव को एक क्षण मा एक सम्भाव्य तरीका मा उत्पन्न हुन्छ, कि मानिस उसलाई रहन बनाउँछ।
मानिसलाई हेर्नु भन्दा ग्रहण लाग्ने केहि छैन आत्मविश्वासी महिला, बिना हिचकिचाहट, अनिर्णय बिना र सबै भन्दा माथि असुरक्षा बिना। उनीहरूलाई पूर्ण संयम र दृढ संकल्पका साथ जीवनको सामना गर्ने तरिका थाहा छ।
समावेश आत्मनिर्भरता यस सुरक्षा भित्र खेल्न आउँछ। यदि एक महिलाले स्वतन्त्र रूपमा र कसैको मद्दत बिना भावनात्मक विवादहरू समाधान गर्न सक्षम छ भने, उनी पुरुषको लागि धेरै आकर्षक हुन सक्छ।
भावनात्मक र आर्थिक स्वतन्त्रता
भावनात्मक स्वतन्त्रता भएका मानिसहरू आकर्षक हुन्छन्तिनीहरूले आफूलाई त्यो तनावलाई कसरी नियन्त्रण गर्न अनुमति दिने र कुनै पनि परिस्थितिको सामना गर्न मनोवैज्ञानिक-भावनात्मक सीपहरू राख्नु पर्छ। हामी चिसो र निरुत्साही अभिनय को बारे मा कुरा गर्दैनौं, तर बारेमा भावनात्मक बुद्धि छ र दृढतापूर्वक तनावको एक क्षण आपूर्ति गर्न सक्षम हुनु।
अर्कोतर्फ, आर्थिक स्वतन्त्रताले मानिसलाई जोड्न सक्छ; तर तपाईसँग भएको कुराको मूल्याङ्कन गर्ने सरल तथ्यको लागि होइन, तर यसले आफैंमा प्रभाव उत्पन्न गर्दछ। यो सबै स्थिरता कसरी खोज्ने भनेर जान्नको लागि उनीहरूको स्वतन्त्र र निर्णायक तरिकाको लागि आधार हुनेछ।
तपाईं आफ्नो निर्णय आफै गर्न चाहनुहुन्छ
महिलाहरू आफ्नो स्वतन्त्रता मन पराउँछन्, र धेरै पुरुषहरू पनि गर्छन्। मानिसको ठाउँको सम्मान गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। उहाँसँग पूर्णतया सबै कुरा साझा गर्न संलग्न महसुस नगर्नुहोस्, सायद तपाईंले उसलाई चाहिने सानो ठाउँ दिनुभएको छैन। उदाहरणका लागि, जब एक व्यक्ति कामबाट घर आउँछ र आराम गर्न 30 मिनेटको लागि बस्न चाहन्छ, यो उसलाई त्यो ठाउँ दिनुको पर्यायवाची हो।
त्यसकारण यो हुनु राम्रो हो आफैबाट पूर्ण स्वतन्त्रता निर्णय गर्न अन्य व्यक्तिहरूमा निर्भर नगर्नुहोस्। समर्थन सधैं राम्रो छ, तर तपाइँ लगातार कसै वा केहिमा निर्भर रहने बानीमा पर्नु हुँदैन।
र सबै भन्दा माथि, एक वर्तमान महिला जो सधैं चलिरहेको छ र नयाँ मनपर्छ प्रेममा पर्नुको पर्यायवाची हो। हुन निर्णायक यसले स्वतन्त्र रूपमा समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ, सधैं अद्यावधिक रहन्छ र जोखिम लिन साहस गर्दछ। के यी सबै कारणहरू साँच्चै मानिसलाई झुकाउने हुन्?
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » महिलाबाट पुरुषलाई कुन कुराले जोड्छ
जब मानिसले तपाईलाई माया गर्दैन, उसले कस्तो व्यवहार गर्छ?
पछाडिको कपाल किन बढ्छ र कसरी हटाउने?